Orodyahankii Xayle Gabre-salaase Oo Ku Biiray Dagaalka TPLF – Heemaal News Network
Orodyahankii reer Itoobiya ee Gebrselassie Haile Gebrselassie ayaa wacad ku maray inuu ku biiri doono dagaalka ka dhanka ah xoogagga fallaagada ah ee Tigreega, wax yar ka dib markii uu Ra’iisul Wasaare Abiy uu sheegay inuu dagaalka ka dhanka ah Jabhada TPLF hogaamin doono.
48-jirka ciyaaraha Olambikada ka fariistay, ayaa sheegay inuu dareemay inuu ku qasban yahay inuu ku biiro dagaalka sababtoo ah jiritaanka Itoobiya oo “khatar ku jira”.
Haile, ayaa sidoo kale sheegay in uu aaminsan yahay in ciyaaruhu ay horseedaan “nabad iyo jacayl”. Balse waxa uu difaacay go’aankiisii ahaa in uu ku biiro dagaalka ka dhanka ah Jabhada Tigreega ee kacdoonka wada iyo xulafadooda, kuwaas oo bishii hore ku hanjabay in ay qabsan doonaan caasimadda Addis Ababa.
“Maxaad samayn lahaydeen marka uu waddanka jiritaankiisa khatar galo, wax walba dhulka ayaad dhigaysaa, waanad dhaqaaqaysaa intii aad hadhow calaacali lahayd”
Xayle waxa uu colaadda Itoobiya ka socota ku tilmaamay mid Itoobiya oo kaliya aan halis ku ahayn balse ah “Halis soo wajahday Afrika oo dhan.
“Itoobiya waa waddan wax badan ku soo kordhiyey Afrika iyo guud ahaan qaaradda ,” ayuu yidhi. “Haa, waa dal ku dayasho mudan, Itoobiya oo jilba joogsata waxay si dadban u jilba jooginaysaa inta kale ee Africa ah, tani waa wax aan macquul ahayn.”
Xayle ayaa sidoo kale iftiimiyay doorka ama kaalinta uu doonayo inuu ka qaato dagaalka oo u tafo xaytay.
“Ma waxaad iga filaysaa inaan sheego inaan ku dhimanyo dagaalka? Haa, taasi waa natiijada ugu dambaysa dagaal leeyahay,” ayuu yidhi. “Ma jirto sabab aan halkan isaga sii fadhiyo cabsi darteed, maxaa yeelay colaadu waxay iman doontaa albaabkayga, waxay iman doontaa gurigayga, mana garanayno goorta ay imanayso. Sidaas darteed waa in aan nafta huraa oo aan dagaalka ka qayb qaataa.
Qaybo ka Mid ah Magalada Baladwayne Oo Laga Barakacay.
Hargaysa;-Mooshin ka Dhan ah Guddida Caymiska Oo loo Codeeyay
Heemaall September 21, 2021 September 21, 2021
Gudoomiye Degmo Oo ku Taliyay in Carabka Laga Jaro Ikraan Tahliil Hooyadeed
Heemaall October 1, 2021 October 1, 2021